ဆယ်ကျော်သက်များသည် Art Markman Ph.D. မှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကို (၂၀၁၄) တွင်ပြုပြင်ခြင်း - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
မြီးကောင်ပေါက်အနုပညာ Markman Ph.D ဘွဲ့ကိုအသုံးပြုပုံ်အကျိုးကျေးဇူးသောအရာတို့ကို (2014) တွင် fixation Get
ကထုတ်ဝေတဲ့ Post ကို အနုပညာ Markman Ph.D ဘွဲ့ကို ဒီဇင်ဘာ 12, 2014 တွင် ရိုးမသားအကြံအစည်
ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အသက်အန္တရာယ်အန္တရာယ်များတဲ့အပြုအမူ၏အချိန်ဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုရန်ဘုံဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့၊ ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာဘာကြောင့်အန္တရာယ်များတဲ့အပြုအမူတွေကိုကျူးလွန်တာလဲဆိုတာကိုပြောတဲ့အခါမှာတော့တိုကျရိုကျတဲ့အမြှေးမြားကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျစတေယျ။ ကျနော်တို့ရဲ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေးပါဝင်ပတ်သက်ယန္တရားများရှိသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ ဦးနှောက် စေ့စပ်ထားပြီးကြောင်းအပြုအမူကိုရပ်တန့်။ In စမတ်ပြောင်းလဲခြင်း (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်)ဤရွေ့ကားယန္တရားများကို Stop System ဟုခေါ်သည်။ တိုကျရိုကျအမြှေးပါးများသည်လူကွီးမစောမှီအပြည့်အဝရင့်ကျက်ခြင်းမရှိသောကွောင့်၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အန္တရာယ်များသောအရာများကိုလုပ်ဆောင်ရသောကွောင့်ဖြစ်သည်။
Stop System သည်ရင့်ကျက်ခြင်းမရှိသေးပါကကလေးငယ်များပင်အန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများစွာကိုပြုလုပ်သင့်သည်။ အဲဒီအစားအခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှိသေး၏။ မြီးကောင်ပေါက်များသည်လည်းအကျိုးဖြစ်ထွန်းသောအပြုအမူများစွာကိုထိတွေ့ဆက်ဆံကြသည်။ ငါကလူတွေကိုအပြုအမူတွေဆီ ဦး တည်သွားစေတဲ့ယန္တရားလို့ခေါ်တယ်။
ဒီအမြင်မြီးကောင်ပေါက်အလားအလာအန္တရာယ်များကြားမှဆုလာဘ်ကိုလိုက်ရန်မောင်းထုတ်သော Go ကိုစနစ်နှင့်အန္တရာယ်များသောအပြုအမူရပ်တန့်နိုင်စွမ်းမဟုတ်သော Stop စနစ်၏ပြီးပြည့်စုံသောမိုဃ်းသက်မုန်တိုင်းရှိသည်အကြံပြုထားသည်။
၏နိုဝင်ဘာလ 2014 ပြဿနာတစ်ခုစိတ်ဝင်စားဖို့စက္ကူ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံ (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်) ကို Zachary Roper, Shaun Vecera နှင့် Jatin Vaidya အားဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်အန္တရာယ်များအပြုအမူ၏ဤအမြင်တချို့သက်သေအထောက်အထားပေးစွမ်းသည်။
ဤရွေ့ကားသုတေသီများမြီးကောင်ပေါက်ဆုလာဘ်ဆီသို့ရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်သူတို့အတွက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းပစ္စည်းများမှသတိထားရမှာအတွက်ဆက်လက်ရှိသင့်ကြောင်းအကြံပြု ပတ်ဝန်းကျင်သူတို့မရှိတော့အကြိုးများမှာပင်အခါ။
ဤဖြစ်နိုင်ခြေကိုစမ်းသပ်ရန်ဆယ်ကျော်သက် ၄၀ (၁၃ မှ ၁၆ နှစ်ကြားအရွယ်) နှင့်အရွယ်ရောက်သူ ၄၀ (ပျမ်းမျှအသက် ၂၇ နှစ်) သည်လေ့လာမှုတစ်ခုတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု၏ပထမပိုင်းတွင်ပါဝင်သူများသည်ကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရောင်စုံစက်ဝိုင်းများစွာကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစက်ဝိုင်း၏အတွင်းပိုင်းတစ်လိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်အနီရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်စက်ဝိုင်းတစ်ခုအမြဲရှိသည်။ ကျန်အရောင်များမှာမူအခြားအရောင်များဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများသည်ပစ်မှတ်စက်ဝိုင်းအတွင်းရှိလိုင်းသည်အလျားလိုက် (သို့) ဒေါင်လိုက်ဟုတ်မဟုတ်ညွှန်ပြရန်ခလုတ်နှစ်ခုထဲမှတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။ သူတို့မှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်တဲ့အခါသူတို့ဟာဆုချခံခဲ့ရပါတယ်။ ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး စီအတွက်အရောင်တစ်မျိုးသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားဆု (၂ ဆင့်) ထက်ပိုမိုကြီးမားသောဆုလာဘ် (၁၀ ဆင့်) နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး အတွက်အနီရောင်စက်ဝိုင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းဆုချခြင်းနှင့်အစိမ်းရောင်စက်ဝိုင်းသည် ၂ ရာခိုင်နှုန်းဆုချခြင်းဆီသို့ ဦး တည်စေနိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့သောစမ်းသပ်မှုပေါင်း ၂၄၀ ကိုလုပ်ဆောင်ပြီးနောက်လုပ်ငန်းကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယခုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်နောက်ထပ်အပြာရောင်စိန်တစ်ပွင့်ကိုရှာဖွေပြီးထိုပုံသဏ္insideာန်အတွင်းမျဉ်းကြောင်း၏လမ်းကြောင်းကိုသတင်းပို့ရမည့်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှု ၂၄၀ ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤစမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်ကာလအတွင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရာဝတ္ထုများ (ခေါ်သော) distractor ပစ္စည်းများ) အရောင်စက်ဝိုင်းခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်မှုအချို့တွင်အာရုံပျံ့လွင့်စေသောစက်ဝိုင်းများထဲမှတစ်ခုသည်အနီရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်လေ့လာမှု၏ပထမပိုင်းတွင်ရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
အဓိကမေးခွန်းမှာစာမေးပွဲစစ်ဆေးမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများအားမှန်ကန်စွာတုန့်ပြန်ရန်အချိန်ပမာဏသည်လေ့လာမှု၏ပထမပိုင်းတွင်ဆုချခဲ့သောစက်ဝိုင်းများရှိနေခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိဖြစ်သည်။ သင်တန်းသားများအနေဖြင့်အတိတ်ကာလကဆုရရှိခဲ့သည့်အာရုံထွေပြားသူတစ် ဦး ၏ရှေ့မှောက်၌တုန့်ပြန်ရန်အချိန်ယူပါက distractor သည်လုပ်ငန်း၏အစစ်အမှန်ရည်မှန်းချက်မှအာရုံကိုဆွဲဆောင်သည်ဟုအကြံပြုသည်။
ကန ဦး လေ့ကျင့်မှုကြောင့်လူကြီးများကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်ခြင်းမရှိပါ။ စမ်းသပ်မှု၏ပထမအုပ်စုတွင်စမ်းသပ်မှုပထမအုပ်စုတွင်အာရုံပျံ့လွင့်သူတစ် ဦး အားဆုချသောအခါတုံ့ပြန်မှုအနည်းငယ်နှေးကွေးသည်။ စမ်းသပ်မှုပေါင်း ၆၀ ခန့်ကြာပြီးနောက်တွင်လူကြီးများသည်ယခင်ကရရှိခဲ့သောဆုကျေးဇူးကြောင့်မထိခိုက်တော့ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ Go System သည်လူကြီးများအားဆုလာဘ်အဟောင်းများဆီသို့မပို့ဆောင်တော့ပါ။
အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်အတော်လေးကွဲပြားခြားနားပြုမူ။ ယခင်ကအာရုံပျံ့လွင့်စေသည့်စက်ဝိုင်းတစ်ခုကိုဆုချသောအခါသူတို့တုံ့ပြန်ရန်နှေးကွေးသည်။ ကြီးမားတဲ့ဆုလာဘ်ကိုရစေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအာရုံထွေပြားစေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာအနှေးဆုံးပဲ။ အနှောင့်အယှက်ပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှဆုမရသောအခါသူတို့သည်အမြန်ဆုံးဖြစ်သည်။ သေးငယ်တဲ့ဆုလာဘ်တယ်သောစက်ဝိုင်းအကြားထွက်လာ၏။ ဤသည်အကျိုးသက်ရောက်မှု 240 စမ်းသပ်မှုစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုံးကို set ကိုကျော်ဆက်လက်တည်ရှိ။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်စမ်းသပ်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အသက် ၁၃ နှစ်နှင့် ၁၄ နှစ်အရွယ်များတွင်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအရင်ကဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသောစက်ဝိုင်းများကအများဆုံးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ အသက် ၁၅ နှစ်နှင့် ၁၆ နှစ်အရွယ်လူငယ်များသည်ယခင်ကဆုချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသောစက်ဝိုင်းတစ်ခုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါအနည်းငယ်နှေးကွေးသော်လည်းငယ်ရွယ်သောဆယ်ကျော်သက်များနှင့်မတူပါ။
ဒါကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာတွေ့ရတဲ့အန္တရာယ်များတဲ့အမူအကျင့်နှစ်ခုရှိတယ်။ ပထမ၊ ဆယ်ကျော်သက် Go စနစ်သည်အတိတ်ကဆုရရှိခဲ့သည့်အရာများဆီသို့ ဦး တည်သွားသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် Go System ၏ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုလျော့ပါးစေသည်။ ထို့နောက်ထိပ်ဆုံးတွင် Stop System သည် Go System ၏လမ်းညွှန်ကိုကျော်လွှားရန်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့်ဆယ်ကျော်သက်များသည်အတိတ်ကအကျိုးကျေးဇူးများကိုလုပ်ဆောင်ရန်တွန်းအားကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြသည်။
နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်ဆယ်ကျော်သက်များမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏အရေးပါမှုကိုအတည်ပြုသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်ပြင်းထန်သောသွေးဆောင်မှုကိုကျော်လွှားရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များအားအန္တရာယ်ရှိသောအပြုအမူများကိုရှောင်ရှားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာပတ်ဝန်းကျင်မှအထင်ရှားဆုံးသောအန္တရာယ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည်သူတို့မလုပ်သင့်သည့်လှုပ်ရှားမှုများအားငြင်းဆိုရန်သင်ယူရန်လိုအပ်သော်လည်းသူတို့၏ Go Systems ၏အားကောင်းသည့်စွမ်းအားကိုကျော်လွှားရန်မလိုပါ။
အကြှနျုပျကိုလိုက်နာပါ တွစ်တာ (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်).
ထိုအပေါ် Facebook က (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်) နှင့်ပေါ် Google+ မှာ (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်).
ငါ၏အသစ်ကိုစာအုပ်ထုတ်စစ်ဆေး စမတ်ပြောင်းလဲခြင်း (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်).
နှင့်ငါ့စာအုပ်တွေ စမတ်အတွေးအခေါ် (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်) နှင့် ခေါင်းဆောင်မှု၏အလေ့အကျင့် (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်)
Austin တွင် KUT ရေဒီယိုအပေါ်မှာငါ့ရေဒီယို show ကိုနားထောင်ပါ သင့်ရဲ့ဦးခေါင်းအပေါ်နှစ်ဦးကိုယောက်ျားများ (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်) နှင့်အတိုင်းလိုက် Twitter ပေါ်တွင် 2GoYH (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်) နှင့်ပေါ် Facebook က (link ကိုပြင်ပဖြစ်ပါသည်).